ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) ၏ Minister of State for Pacific and the Environment ဖြစ်သူ The Rt. Hon Lord Goldsmith အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | Ministry Of Information
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) ၏ Minister of State for Pacific and the Environment ဖြစ်သူ The Rt. Hon Lord Goldsmith အား လက်ခံတွေ့ဆုံ /
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) ၏ Minister of State for Pacific and the Environment ဖြစ်သူ The Rt. Hon Lord Goldsmith အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Submitted by admin on Tue, 09/22/2020 - 18:59
နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၂၂
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းသည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) ၏ Minister of State for Pacific and the Environment ဖြစ်သူ The Rt. Hon Lord Goldsmith နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး Mr. Dan Chugg တို့အား ယနေ့ ညနေ ၄ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၌ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက UK aid အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအား အကူအညီများ ပေးအပ်နေခြင်း အတွက် အသိအမှတ်ပြုပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံ တို့အကြား နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်မှု ကဏ္ဍတို့တွင် အောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာ သည့် စီးပွားရေး သက်ရောက်မှုများကို ကုစားနိုင်ရေးအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ စီးပွားရေး ထိခိုက်မှု သက်သာရေးစီမံချက် (CERP) ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း၊ ကပ်ရောဂါ အလွန်ကာလတွင် ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ ပြန်လည်ထူထောင်ရာ၌ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုမရှိဘဲ ရေရှည်တည်တံ့စေမည့် နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ ကြောင်း ဆွေးနွေးသည်။
ထို့နောက် The Rt. Hon Lord Goldsmith က နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သစ်တောများ ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောပြုန်းတီးမှု ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြန်လည် ပြည့်ဖြိုးမြဲ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ၌ ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ လုပ်ငန်းရှင်များ ပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းကောင်း များနှင့် ကပ်ရောဂါကြောင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနည်းတူ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကြုံတွေ့ရလျက်ရှိသည့် အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားနိုင်ရန် အတွက် ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ ဆက်လက် အကူအညီပေးအပ်သွားမည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဗရတ်ဆင်းနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီသို့ အလှူငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်း
ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် မြစ်ကြီးနား-ဆွမ်ပရာဘွမ်လမ်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ များနှင့်ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကွင်းဆင်းစစ်ဆေး
ရွာသစ်မြို့တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက် မြို့အ၀င်ဂိတ်တွင် အထူးကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်
ပြည်ပ၌ အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် မြန်မာသင်္ဘောသားများအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့
ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ ဝယ်ယူထားသည့် ကိုဗစ် - ၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အထောက်အကူပစ္စည်းများ ထပ်မံရောက်ရှိ
အမှတ်တရဖြစ်နေရသော ဆရာကြီး ဆရာမကြီးများ
အသိတရား သတိထား၍ စည်းရုံးလှုပ်ရှား
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၂၅-၁၀-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၇:၃၀)နာရီ
ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပွားမှုနှင့် ရောဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ အပတ်စဉ်တင်ပြဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ